सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ बाँडफाँड आज, रिजल्ट कहाँबाट हेर्ने ? - Arthasansar
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ बाँडफाँड आज, रिजल्ट कहाँबाट हेर्ने ?
शुक्रबार, ३० असोज २०७७, ०७ : २० मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं– काठमाडौँ सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले निष्काशन गरेको आइपिओ बाँडफाँड आज हुँदैछ । निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको अनुसार क्यापिटलको कार्यालयमा हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
यस अन्तिम तथ्यांकलाई हेर्दा न्युनतम १० कित्ताको दरले वितरण गर्दा २ लाख ७३ हजार जना आवेदकले मात्र शेयर हात पार्नेछन् भने बाँकी ६ लाख १५ हजार ७ सय ६ जनाको हात खाली हुनेछ ।
कम्पनीले असोज २१ गते, बुधबारदेखि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता साधारण शेयर (आइपिओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो । जसमध्ये १ लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई, १ लाख ५० हजार कित्ता म्युचुअल फण्डहरूलाई र बाँकी २७ लाख ३० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको हो ।